Inkqubo yeeMagnetic Shuttering abavelisi kunye nabaxhasi - China Inkqubo yokuVala iMagnetic Factory - Icandelo 2
Inkqubo yeMagnetic Shuttering yindibaniselwano esebenzayo yeemagnethi zokuvala kunye nokubumba kwentsimbi. Ngokwesiqhelo inokusetyenziselwa ukuphatha iirobhothi okanye ukusebenza ngesandla.
2100KG, 2500KG Ukutsala Force Precast Concrete Magnet Assembly for Steel Formwork okanye ngamaplanga zomngundo Ukulungisa
I-2100KG, i-2500KG Precast Concrete Magnet luhlobo lomgangatho wamandla ohlobo lweemagnethi ezivaliweyo, ekucetyiswa kakhulu ukuba zisetyenziselwe ukulungisa i-sidemould kwiiphaneli zesandwich zekhonkrithi zangaphambi kokuba zenziwe.
I-1800KG yokuValwa kweMagnethi nge-On / Off Button yeNkqubo yeFom yoKwakha esekwe ngaphambili
I-1800KG yokuVala iMagnet yimagnethi yebhokisi eqhelekileyo yokulungisa isikhunta kwimveliso yekhonkrithi. Ngenxa yamandla ombane anqabileyo anqabileyo omhlaba, inokubamba ukungunda etafileni ngokuqinileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kwifomwork yentsimbi okanye ngomthi weplywood.
900KG, 1Ton Box iimagnethi For Precast Tilting Itafile zomngundo Ukulungisa
I-900KG Magnetic Shuttering Box yinkqubo yemagneti eyaziwayo yokuveliswa kwepaneli yangaphambi kwemveliso, zombini zomthi kunye necala lesinyithi esecaleni, eyakhiwe ngeqokobhe lekhabhoni kunye neseti yenkqubo yemagneti ye-neodymium.
Uhlobo lwebhokisi yemagnethi engama-450Kg bubungakanani obuncinci bemagnethi yokulungisa i-sidemold kwitafile yekhonkrithi esele yenziwe. Ihlala ivelisa ukukhanya kwiphaneli yekhonkrithi elula njenge-30mm ukuya kwi-50mm ubukhulu.